Ciidamada XDS oo la wareegay degmada Matabaan & Wararkii ugu dambeeyay | HalQaran.com
Hiiraan (Halqaran.com) – Wararka ka imaanaya Degmada Matabaan ee Gobolka Hiiraan, ayaa sheegaya in Ciidamada Danab ee Xoogga dalka Soomaaliya ay la wareegeen gacan ku haynta degmadaasi.
La wareegitaanka Degmada Matabaan ee Ciidamada Xoogga dalka waxa ay ka dambeysay, kadib markii Ciidamada Ahlu Sunna ay is hortaageen wafdi uu hoggaaminaayay Wasiirka Arrimaha Gudaha oo doonaayay inuu galo Magaaladaasi.
Dagaal kooban oo ka dhacay Degmada Matabaan kadib Ciidamada Danab ee Xoogga dalka Soomaaliya ayaa waxaa u suuragashay inay la wareegaan gacan ku haynta Degmada Matabaan.
Ciidamadii Ahlu Sunna ayaa u baxay Banaanka Magaalada, waxaana wararka ay sheegayaan inay halkaasi ka wadaan Ciidan aruursi.
Ugu dambeyn, Xaaladda Degmada Matabaan ee Gobolka Hiiraan ayaa hadda u muuqata mid degan, waxaana suuragal ah in xilli walba uu dagaal halkaasi ka dhaco, maadaama Ahlu Sunna ay wadaan Ciidan aruursi.
Ciidamada xoogga dalka